Sami Khedira Oo Aflagaado Kala Kulmay Taageereyaasha Juventus | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Sami Khedira Oo Aflagaado Kala Kulmay Taageereyaasha Juventus
Laacibka khadka dhexe ee Sami Khedira ayaa arrin niyad jab ku ah kala kulmay taageereyaasha kooxdiisa Juventus ciyaartii Sabtidii ay ku karbaasheen AC Milan ee ku dhamaatay 3-1.
Taageereyaasha ayaa cay u miisay Khedira marar dhawr ah iyagoo bartilmaameedsaday marar badan oo uu kubadda qabsaday.
Ciyaartan oo ka dhacday garoonka Allianz Stadium ee Juventus, ayaa inkasta oo kooxdiisu ay guul gaadhay, waxay taageereyaashu ka cadhoodeen qaybtii dambe markaas oo laacibkan u dhashay waddanka Germany uu khalday kubbad dhiibis uu u waday asxaabtiisa oo AC Milan ay ka qaadatay.
Khedira oo lagu yaqaano inuu markaaba kasoo kabto dhibaatada loo geyso ayaa inyar kaddib qayladii taageereyaasha muujiyey awood, waxaana uu kala xidhay khadka dhexe isagoo kooxda u suurtogeliyey inay hesho goolal gaar ahaan goolkii uu dhaliyey Juan Cuadrado oo mahaddeeda uu lahaa Khedira.
Arrintan ayaa timid iyadoo ay kusoo fool leedahay ciyaarta Real Madrid ay kusoo dhoweyn doonaan magaalada Turin, taas oo ay ku khasban yihiin inay guul ka gaadhaan si ay uga aarsadaan guul-darrooyinkii labadii sannadood ee u dambeeyey loo xambaariyey.